TWITTER ACCOUNT KARAA SALPHAAN BANACHUUF TARTIIBA KANA HORDOFAA | OROMSIIS OROMO
Leave a Comment	/ April 5, 2021 June 16, 2021
1. Jalqaba link twitter https://twitter.com jachuun browser keessan irratti barreeysaa
2ffaa. Akkuma suraa irratti agartan Signup kan ja’u halluu diimaan suraa kanarratti itti marame tuqaa
3ffaa. Bakka halluu diimaan lakkooysa 1 barraawe keeysatti maqaa keeysan barreeysaa. Sanduuqa lak.2 keeysatti email ykn lakkooysa bilbilaa keeysan galchaa,lak 3 irratti guyyaa dhalootaa guyyaa,ji’aa fii bara dhalootaa guutaa. Eega xumurtanii NEXT tuqaa fuula itti aanu guutaa
4ffaa. Eega maqaa,email ykn bilbilaafii guyyaa dhalootaa guuttan booda barruu xiqqoo next jattu gararraa jirtu tuqaa
5ffaa. Sanduuqa Halluu diimaan itti marame tuqaa
Xumura irratti akkuma suraa armaa olii irratti arkitan SIGN UP kan ja’u yeroo tuqxan Twitter email keeysanirratti message isiniif erga. Accountiin keeysan akka mirkanaawu ykn confirm tahu email keeysan banuun link twitter isiniif erge irratti bakka confirm account jattu tuqnaan Account twitter banattan jachuudha .
Wanni asirratti ifa hin tahin yoo jiraate sanduuqa yaadaa irratti nuuf bareeysaa Galatoomaa.